१६ वर्ष अनसन बसेकी शर्मिलाले गरिन् बिहे ! | KTM Khabar
१६ वर्ष अनसन बसेकी शर्मिलाले गरिन् बिहे !
२०७४ भदौ १ गते १६:३७ मा प्रकाशित
१ भदौ । १६ वर्ष लगातार अनसन बसेकी भारतीय अधिकारकर्मी इरोम शर्मिलाले बिहीबार बिहे गर्नुभएको छ । तामिल नाडुको कोदाइकनालमा बसिरहेकी शर्मिलाले सब–रजिष्टारको कार्यालयमा गएर बेलायती प्रेमी डेसमन्ड कौटिन्होसँग बिहे गर्नुभएको हो ।
दुई महिनाको लामो कानूनी प्रक्रियापछि उहाँहरुको विवाह सम्पन्न भएको खबर टाइम्स अफ् इन्डियामा उल्लेख छ । केही नजिकका साथीहरुको उपस्थितिमा उहाँहरुको विवाह भएको थियो । विवाहमा दुबै जनाको परिवारका कोही पनि सदस्य सहभागी थिएनन् ।
केही दिन अगाडि केही समूहले उहाँहरुको विवाहले सामाजिक मेलमिलापलाई बिगार्ने भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । अगस्ट ४ मा हिन्दु मक्कल कर्ची नाम गरेको समूहले मुद्धा दर्ता गरेको थियो । अदालतले उहाँहरुको विवाह रोक्न परेको मुद्धा खारेज गरिदिएपछि विवाहको बाटो खुलेको हो । इरोम शर्मिलाले आफूहरुको निजी जीवन भएको भन्दै विवाह गर्नु नगर्नु आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भएको भन्दै कसैले टाउको दुखाउन नपर्ने बताउनुभएको थियो ।
इरोम शर्मिलाले २८ वर्षको उमेरमा मणिपुरको इम्फालमा भएको हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि अनसन बस्नुभएको थियो । उहाँले गत वर्ष मात्रै अनसन तोड्नुभएको थियो । शर्मिला यसै वर्ष भएको मणिपुर विधानसभाको चुनावमा पनि उठ्नुभएको थियो । तर उहाँले ९० भोट मात्रै पाउनुभएको थियो ।